Warbixin nagu saabsan - Casino Helsinki & Tampere Warbixin nagu saabsan - Casino Helsinki & Tampere
Warbixin nagu saabsan
Casino Helsinki waxay fidineysaa madadaalo khamaar ah muddo 30 sanadood ah. Waxaad naga heleysaa badhtamaha Helsinki. Waxaan fidinaa kuwo aad u badan oo ah geymam miiska- iyo mishiinada, livepokeri, munaasabado kale iyo sidoo kale adeegyada maqaaxiyaha.
Casino Tampere waa nooc cusun oo ah areenakasino. Waxaan ku naalaa Yurub meelaha ugu casrisan ee khibradda areena lana xidhiidha badhtamaha Tampere. Ciyaaruhu waa kuwo aad u badan oo kalasig ah oo miiska ah iyo kuwo mishiinada ahaa ee ugu dambeeyey adduunka ah. Nokia Arena agteeda ayaa laguugu fidinayaa 15 000 boos oo daawashada ah oo xooggan aadna si baaxad leh loogu gogley madadaaladda xeegada barafka bandhigyadooda.
Kasinooyankayagu waa kuwa yurubta ee kasinooyinka adduunka ugu ilbaxsan oo lag dhisay deegaan ciyaaraha masuul ka ah. Ciyaarahayaga waxaa lagu galaa aqoonsiga kaadhka- Casino ID ga, si aad u gashid xadadka ciyaaraha kugu habboon. Ciyaaraha lacagta lagu ciyaaro xadkoodu waa 18 jir.
Doorashooyinkayaga waxaa laga helaa kuwa loogu jecel yahay ee kalaasiga ah, sida Ruletti, Blackjack iyo Punto Banco sidoo kale kuwa ugu casrisan ee qaababka ciyaaraha Dynamic Poker Pro, Russian Poker iyo Free Bet Blackjack. Ciyaaraha miisku waxay ku yaalaan Casino Helsinki 23 iyo Tampere 13.
Waxaad naga heleysaa isla ciyaaraha mishiinada sida kuwa adduunka ugu badan ee isla kasinooyinka oo ay ku jiraan kuwii ugu dambeeyey ee ugu casrisanaa. Kuwa aan fidineyno si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa. Helsinki ilaa 270 iyo Tampere 130 ciyaaraha mishiinada ka mid ah ah ayaa laga helaa waana hubaal qof walba mid uu xiiseeyo inuu ka helayo.
Kuwa kaliya ee qolalka pokeriga sharciyeysan anaga ayaad naga heleysaa. Casinada Tampere miisaskeedapokerigu waa afar iyo Casinada Helsinki oo todoba ah. Tampere qolkeeda pokerigu waa Louhos – meesha lagu magacaabo agteeda, baarka dhexe ayuu agagaarkiisa u dhow yahay. Helsinki qolkeeda pokeri wuxuu ku yaalaa dabaqa hoose meelaha ciyaaraha miisaska lagu ciyaaro agtooda. Kasinadayada waxaa maalin walba diyaar ku ah pokeriga kaashka ah. Veikkauska dhammaan munaasabadahoosa pokeriga iyo oleleyntoodaba waxaa lagu soo koobay cinwaankan veikkaus.fi/fi/pokeri.
Warbixinaha la xidhiidhka
U adeegidda macmiishayada ayaa kaa caawinaya kuuguna adeegaya cinwaankan veikkaus.fi/fi/asiakaspalvelu Sidoo kale waxaad naga heli kartaa lambarkan 0200 55000 (pvm/mpm). U adeegidda macaamiishayadu waxay kuu adeegayaan maalin walba saacadaha u dhexeeya 6-24.
Kasinooyinka gelitaankooda iyo keydinta dharkuba waa u lavag la’aab kuwa kasinoda imaanaya.
Booqashada ugu horeysa ee kasinoda aad ku imaneysid macmiilka waxaa laga hubinayaa aqoonsigiisa waana laga sawiranayaa. Si loo hubiyo macmiilku shaqsiga uu yahay waxaa loo baahan yahay aqoonsi sawir leh, oo hagaagsan shaqeynayana inuu yahay macluumaadka aqoonsigaaga ahi, kaas oo macmiilka si aamin ah loo xaqiijin karo.
Macluumaadka la aqbalayaa waa
1. Baasaboor, ay dowladda Finland ku siisay
2. Baasaboor, dowlad dibada ahi kuu ogolaatey
3. Kaadhka aqoonsiga, oo ay dowladda Finland (1.3.1999 ka dib kuu ogolaatey)
4. Kaadhka aqoonsiga, oo dalalka EU iyo ETA-agagaarkoodu kuu ogolaadeen (ml. Sveitsi, San Marino), oo macluumaad safar ahaan loo aqbali karo
5. Liisanka wadista ee dalka gudihiisa (oo caag ah*), oktoobar 1990 laga bilaabo la ogolaaday
6. Baasaboorka dadka ajnabiga iyo macluumaadka safarada ee qaxootiyada (oo aan lahayn calaamaddo qarinayashaqsiga aqoonsashadiisa)
*) Veikkaus wey aqbalayaan liisanka wadista dalka gudihiisa ee caaga ah iyadoo lagu salaynayo qiimeynta halista ah Macmiilka mudnaanta leh diiwaangelintiisa iyo sidoo kale ku arrinsashadiisa. Liisanka wadista waa inuu ahaado Traficomin cadeyn ay ku ogolaadeen xuquuqda waditaanka / wadenimada, mana ahan mid lagu aqbali karo bangi ku aqoonsashada (aqoonsiga shabakada bangiga). Veikkaus ma aqbalayaan intii ka horeysey 10/1990 kii la ogolaadey ee kaadhka waditaanka ahaa ee caaga weyn ahaa taasoo ay keentey in fursado ka been abuurasho badan ah lagu sameeyey.
Casino ID – Furaha masuuliyadda adduunka ciyaaraha
Veikkaus kasino waxaa lagu ciyaaraa inaad ku gashid aqoonsanaanshaha iyo dhinaca Know Your Game -macmiiladeena ayaa kaa kaalmeynaya masuuliyadda ciyaarta. Sidoo kale waxaanu kaa taageereynaa, markaad dooneysid inaad ciyaartaada xadeysid. Taas aywgeed ayuu ciyaarahayagu u ciyaarayaa isagoo la aqoonsadey, waana qeyb lagama maarmaan u ah waayo aragnimada kasinoda. Waayo aragnimada ayaad ku heleysaa kaadhka- Casino ID ga, kaas oo ah furaha adduunka ciyaaraha. Hadafkeenu waa, in dhammaan macaamiisheenu naftooda u dejistaan xad ciyaareed oo ku habboon. Shaqaalaheena ayaa kaaga jawaabaya dhammaan su’aalaha khuseeya ciyaaraha kuguna hagaya si masuulnimo kleh u ciyaaridda.
Waxaad adeegsaneysaa qalabkan soo socda si aad u maareysid ciyaartaada:
Ciyaaraha miisaska maalin- iyo/ama bil kasta xadka gadashada
Mishiinada ciyaarta maalin- iyo/ ama bil kasta xilligga ciyaarta xadadka guul daradda
Mishiinada ciyaarta waxaad ka hortagi kartaa ciyaarista maalmaha furnaanshaha ee la sheegayo mishiinka badhankiisa ka hor tag ciyaarista (Estä pelaaminen).
Fursad waxaad u haysataa inaad naftaada u dajesid 3 bilood- 1 sano muddo dhan oo ah iska mabnuucidda kasinoda.
Xadeynta ciyaartu waxay si wadajir ah uga shaqeyneysaa Helsinki, iyo Tampere kasinooyinkoodaba. Waxaad iskaga dejin kartaa xadeynta dhinaca shaqaalahayaga.
Meelahayaga xanibaad la’aantooda waa laga fiirsaday. Kursiga fnaafadu lagu riixo ama wataan dhammaan meelaha kasinodayada waa lala mari karaa.
Kasinoda si nadiifa oo ujeedadeedu tahay qaab labiska fiideedkii munaasabadda caweyntu sida ay dhigayso si waafaqsan iyadoona la tixgelinayo dadka kale ee kasinoda martida u ah ayaa loo soo labistaa. ”Casual but smart” ayaa wanaagsan habraaca in loogu soo labisto kasinoda. Madaxa wax lagu xidho waa ka mabnuuc.
Qalabka wax lagu bixiyo
Kasinoda ciyaaraha waxaa loo isticmaalaa lacag kaash ah. Maqal hayaha ayaa kuugu sarifaya lacagtaada sarifyada guud ah lacag ahaan. Maqaaxiyaha waxaad ku bixin kartaa sidoo kale kaadhasha aaminaada.. Kasinodayada waxaa ku yaala otomaatiga- OttoPlus. OttoPlus waa otomaatig, kaas oo kuu suurtogalinaya lacag kala bixidda oo ay dheer tahay inaada ku shuban karto kaashkaaga kaadhkaagu akoonka uu kugu xidhan yahay.
Bar All In waxay isku ururisaa Mikonkatu kuwa maraya iyo kuwa u soo booqanaya kasinoda inay ku nafisaan jawiga nasashada deggan.
Sports Bar Casino Helsinki waa goob ay jecel yihiin ciyaar yahanadu. Baarka ciyaaryahana waxaa ku yaalo shaashado aad u badan iyo kanaalo fara badan oo la kala dooran karo, si aynan kuu dhaafin ciyaarta aad jeceshahay.
Fennia Salonki waa Casinada luulka Helsinki. Waa meel taariikhi ku ah meelo aad u heer sareeya oo waaweyn tusaale ahaan xafladaha lama ilaawaanka ah ee gaar ahaaneed, munaasabadaha madadaalada iyo tartanada ciyaaraha pokeriga ee kasinoda.
Pajazzo Trattoria on lounaspaikka aivan Helsingin sydämessä.
Casino Taproom – maqaaxida panimo waxay kuu fidineysaa xilli walba beer kala duduwan, iyo taas wax ku habboon oo cuno yar ah. Maalmaha shaqada Taproom waxay fidiyaan sidoo kale qado saacadaha u dhexeeya 11-14.30. dhinaca Kasinoda ayaad kaga istareexi kartaa adeegyada Taproomka Suisto Sports Loungessa, Halkaas oo leh fursado aad u wanaagsan oo ciyaaraha isboortiga lagala socon kale meeshaasna waxaa yaala shaashado aad u fara badan.
Casino Emerald Lounge waa baarka kasinoda ee Yurub ugu casrisan. Kasicodayada wadnaheeda baarka halbowlaha u ihi wuxuu kuu fidinayaa waxyaalo yaryar oo dhandhanaan, doorashooyin aad u balaadhan oo cocktailo tayo leh ah iyo sidoo kale kan Finland ugu wanaagsan ee mocktailka- kala duduwan.
Casinoda Helsinki madadaalada ay fidisaa waa mid aad u heersareysa oo dhinacyo badan. Tugidhada munaasabadaha madadaalooyinka Helsinki waxaad ka soo qaadan kartaa maqal hayaha kasinoda iyo Lippu.fi:ga dhinacooga kautta.
Casino Tampere tan ay meesha ku wada yaalaan ee Nokia Arena munaasabadaheeda warbixintooda waxaad ka heleysaa halkan.
18+ Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi Veikkaus